Ukubaluleka kokuqiniselwa esinqeni
Zininzi iindidi zokubopha esinqeni, kwaye kufuneka uthathele ingqalelo iimfuno zakho xa uzikhetha, kwaye uzivavanye kula manqaku alandelayo. 1. Ngaba injongo yokukhusela i-lumbar spine okanye inyonga? Eyangaphambili kufuneka ithenge unogada wesinqe esiphakamileyo, eyokugqibela ifuna ukuthenga okhululekileyo okhalweni. Umonde ...
Ngaba ulisebenzisa ngokufanelekileyo ibhanti lenkxaso yesisu?
Indima yebhanti ekhulelweyo yokuxhasa isisu ikakhulu kukunceda abasetyhini abakhulelweyo babambe isisu. Inika uncedo kwabo baziva ukuba isisu sikhulu kwaye kufuneka sibambe isisu ngezandla zabo xa sihamba, ngakumbi xa imithambo edibanisa isinqe ikhululekile. Ye p ...
ngomphathi ku 21-06-05
Iiphedi zedolo zibhekisa kwinto esetyenziselwa ukukhusela amadolo abantu. Inemisebenzi yokukhuselwa kwezemidlalo, ukukhuselwa kubanda kunye nokufudumala, kunye nokugcinwa ngokudibeneyo. Yahlulahlulwe kwimidlalo yezemidlalo kunye neephedi zedolo lezempilo. Kufanelekile ukuba iimbaleki, abantu abadala kunye nabantu abadala, kunye nezigulana ezine-k ...
Nguwuphi umsebenzi webhande lexantathu?
Amabhandeji angunxantathu abonakala ngathi avele rhoqo kubomi bethu, kodwa sukubajongela phantsi oonxantathu. Indima yayo kwezonyango akufuneki ijongelwe phantsi. Ibhandeji engunxantathu ubukhulu becala isetyenziselwa ukukhusela amanxeba kunye nokulungisa amalungu omzimba enzakeleyo. Ukuba kukho imfuneko, kufuneka lwenziwe ngebhandeji ...
Qaphela oku xa usebenzisa ingqiniba engqinibeni
Izibonakaliso ze-elbow brace: Uxinzelelo lwe-medial kunye ne-lateral ligaments ye-elbow joint. Ukukhululwa ngokudibeneyo kwe-Elbow kunye ne-arthritis emva kotyando okanye ukwaphuka. Unyango olulondolozayo lwendibaniselwano edibeneyo kunye nokwenzakala kwezicubu ezithambileyo kunye nokuthintela isivumelwano. I pa esezantsi ...
Inguqu yamadolo eguqukayo
I-brace brace sisakhiwo esidibeneyo esikufutshane nolwakhiwo lomzimba womntu kwaye sinokudityaniswa ngokusondeleyo kunye nezicubu zomntu ezidibeneyo ukuyenza ikhululeke ngakumbi kwaye ibe lula. I-Chuck nge-angle ehlengahlengisiweyo, inokuhlengahlengiswa kwii-engile ezahlukeneyo ngokweemfuno ...
Ukuqaliswa kwekhola yomlomo wesibeleko
Ikhola yomlomo wesibeleko sisixhobo sonyango esincedisayo se-spondylosis yomlomo wesibeleko, enokuqhekeza nokukhusela i-vertebrae yomlomo wesibeleko, ukunciphisa ukunxiba kwemithambo-luvo, ukunciphisa ukusabela okwenzakalisayo kwamalungu angaphakathi, kwaye iluncedo kulungiso lwe-edema yethishu kunye nokududuza ...